Zvakanakira - Shineon Technology Co, Ltd.
Uchishandisa yakakwira phosphor recipe uye kurongedza matekinoroji, Shineon anga agadzira matatu akazara masystem LEDs akateedzera zvigadzirwa. Iwo matekinoroji anotibvumidza isu mainjiniya uye tune iyo yakasarudzika simba rekuparadzira SPD yechena LED, kuti tiwane yakanakisa mwenje sosi yakakodzera kune akasiyana mafomu.
Kutsvagurudza kwakaratidza kuwirirana pakati pevara rezviedza uye vanhu circadian kutenderera. Ruvara kugadzirisa kune zvakatipoteredza zvanyanya uye zvakanyanya kukosha mune emhando yepamusoro magetsi ekushandisa.
Iyo wavelength ye UV inobva ku10nm kusvika ku400nm, uye yakakamurwa kuita akasiyana wavelengths: nhema nzvimbo UV curve ye (UVA) mu320 ~ 400nm; Erythema ultraviolet mwaranzi kana hanya (UVB) muna 280 ~ 320nm; Ultraviolet sterilization (UVC) mu200 ~ 280nm bhendi; Ku ozone ultraviolet curve (D) muna 180 ~ 200nm wavelength.
Shineon kushandiswa kwepamusoro hermetic kurongedza tekinoroji, dhizaini maviri akateedzana e LED mwenje sosi mune horticulture. Imwe ndeye monochrome package yakateedzana ichishandisa bhuruu uye tsvuku chip (3030 uye 3535 dzakateedzana), uye imwe yacho phosphor nhevedzano inonakidzwa nebhuruu chip (3030 uye 5630 dzakateedzana). Monochromatic mwenje akateedzera ane mukana weakakwira photon flux kugona
Seinovhurwa nano zvinhu, iyo quantum dots (QDs) ine yakatanhamara mashandiro nekuda kwehukuru hwayo huwandu. Maumbirwo echinhu ichi idenderedzwa kana quasi-idenderedzwa, uye hupamhi hwayo hwakatangira kubva 2nm kusvika 20nm. QDs ine zvakawanda zvekubatsira, senge yakafara kunakidzwa spectrum, yakatetepa emission spectrum, yakakura Stokes kufamba, refu fluorescent yehupenyu uye yakanaka
Yakakwirira ruvara gamut
Nekuvandudzwa kwetekinoroji yekuratidzira, iyo TFT-LCD indasitiri, iyo yakatonga indasitiri yekuratidzira kwemakumi emakore, yakakwenenzverwa zvakanyanya. OLED yakapinda mukugadzirwa kwakawanda uye yakagamuchirwa zvakanyanya mumunda wema smartphones. Matekinoroji ari kusimukira akadai seMicroLED neQDLED ari mukutenderera kuzere.